Sina GIGAJEWE D loko miloko tsara tarehy notapahana Moissanite Loose Diamond Pass Tester Vatosoa ho an'ny fanamboarana firavaka sy mpanamboatra | GIGAJEWE
GIGAJEWE D loko miloko tsara tarehy notapahana Moissanite Loose Diamond Pass Tester dia vatosoa ho an'ny fanamboarana firavaka.
Loko: D (Ambony fotsy)
Fanamarihana: Misy lesoka amin'ny 0.1mm-0.2mm amin'ny fahazoana ny fandrefesana sy ny fandrefesana manual. Mba hifanarahana amin'ny haben'ny diamondra, ny lanjan'ny vokatra dia aseho ho toy ny lanjan'ny diamondra. Koa satria maivana kokoa noho ny diamondra ny Moissanite, ny lanjan'ny Moissanite no tokony ho lanjan'ny diamondra izay ampitomboina amin'ny 0.9.
Ny diamondra namboarina taloha dia nantsoina taloha hoe fitrandrahana tranainy iray dia mitambatra fefy toradroa miaraka amin'ny zoro boribory, mitovy amin'ny ondana (izany no anarana). Ny fenitra momba ny fihenan-koba dia miovaova noho ny haben'ny endriny hafa ary ny tsiro manokana dia hanondro safidy. Na dia tsy dia mamiratra kokoa noho ny diamondra boribory kosa aza izy ireo, ny diamondra voasarika diamondra dia manana afo tsara kokoa, izay ampahany amin'ny fangatahan'izy ireo.
Fonosana azo antoka tsara sy azo antoka
Freight Free Country Freight
Ny fehin'ny vato tsirairay avy amin'ny GIGAJEWE dia ho voasokitra an-tariby manana isa nomerika tsy manam-paharoa, miaraka amin'ny taratasy fanamarinana BIA amin'ny antsipirihany hanohanana ny fanontaniany an-tserasera. Ny endriny tonga lafatra dia tena ilaina amin'ny fanamboarana firavaka metaly sarobidy, izay mendrika ny fanangonanao sy fankasitrahanao.
Previous: GIGAJEWE D loko miloko Trilyion manapaka Moissanite Loose Diamond Pass Tester dia vatosoa ho an'ny fanamboarana firavaka.
Manaraka: PriceList ho an'ny China Vvs Clarity Synthetic Moissanite Diamond Loose Moissanite Vidiny isaky ny kitapo ho an'ny peratra
Cyan Shaped Moissanite vato
Vatosoa Moissanite maitso
Vato Moissanite Kianjan-kianja
Vato Moissanite fotsy mifangaro